Mogadishu Journal » 2018 » January » 11
Mjournal :- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahad-celiyey shacabka iyo Dowlad Goboleedka Puntland sida wanaagsan ee ay u soo dhaweeyeen isaga iyo wafdigiisa. Madaxweynaha oo si diirran loogu soo dhaweeyey Degmooyinka...
Mjournal :- Waxaa goordhaw tiro madaafiic ah lagu garaacay Xarunta Madaxtooyada Soomaalia oo kutaala Degmada Wardhiigley, waxaana inta badan madaafiicdan ku dhaceen xaafado ku dhaw dhaw Madaxtooyada. Madaafiicdan lagu garaacay Madaxtooyada Soomaaliya ayaa lasoo sheegayaa in ay ku...
Mjournal :-Wararka ka imanaya dalka Hindiya ayaa sheegaya in 15 dhalinyaro Soomaali ah oo ku xirnaa xabsiyada dalka Hindiya la sii daayay. Sida ay daabacday Jariirad lagu magacaabo The Indian Express, maxaabiistan ayaa dhamaystey xukun lagu ridey oo ahaa 7 sano oo xarig ah....
Mjournal :-Xildhibaano ka tirsan Baarlamanaka Soomaaliya ayaa la soo sheegayaa in ay qeyb ka noqon doonaan hoggaaminta Dagaal ka dhan ah ururka Al-shabaab oo ka bilaabanaya Gobolka Hiiraan. Xildhibaanadan oo isugu jiraan Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka ayaa la filayaa maanta in...
Mjournal :-Madaxweynaha Dowlada Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku jooga dowlad goboleedka Puntland xalayna ku hoyday magaalada Qardho ee Gobolka Bari ayaa maanta wuxuu gaari doonaa magaalo Xeebeedka Boosaaso. Qaban Qaabada lagu soo dhaweynayo...